भेनेजुएला प्रकरण : ओलीले अमेरिकी राजदुतलाई किन भेट्न चाहे ? | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ बैशाख ८ आईतवार, ०९:५१
भेनेजुएला प्रकरण : ओलीले अमेरिकी राजदुतलाई किन भेट्न चाहे ?
२०७५ माघ २१ गते प्रकाशित, l १३:५५
काठमाडौं, २१ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदुत र्याण्डी डब्लु. बेरीसँग भेटवार्ता गर्न चाहेका छन् । भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक संकटबारे नेपाल सरकारको धारणा (वक्तव्य) बाट अमेरिका बिच्किएको छ ।
हालै सरकारले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कुटनीतिक ब्रिफमा पनि अमेरिकी राजदुत बेरी आएनन् । राजदुतले उक्त ब्रिफिंग बहिष्कार गरेको भनेर समाचार आएपछि त नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिन लागेको अनुमानहरु समेत बाहिर आएका छन् ।
यही बिचमा अमेरिकी सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कार्कीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि त सम्बन्ध बिग्रिन लागेको अनुमान मात्रै होईन दुई देशबीचको कुटनीतिक असमझदारी बढेको प्रष्ट देखिएको छ ।
नेकपाको आज विहान बसेको सचिवालय बैठकको सुरुवातमै यो विषय उठेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बिर्गान हुन्न भन्ने पक्षमा छन । उनले बैठकको सुरुवातमा भनेका थिए, दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ ।
यही भएर होला ओलीले अमेरिकी राजदुत बेरीसँग भेट गर्न चाहेका छन् । उनले राजदुतलाई भेटेरै आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।
ओली डाबोस फोरममा भाग लिन स्विट्जरल्याण्ड गएको बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएलामा उत्पन्न राजनीतिक संकटबारे अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै निन्दा गरेका थिए ।
प्रचण्डले आफूसँग कुनै सहमति नगरी वक्तव्य जारी गरेकोमा ओली रुष्ट थिए। तर, पार्टीको अध्यक्षले एउटा विज्ञप्ती जारी गर्ने अनि सरकारले अर्को विज्ञप्ती जारी गर्दा कुटनीतिक रुपमा नराम्रो सन्देश जाने कारण सरकारले पनि प्रचण्डकै लाईनमा सफ्ट वक्तव्य जारी गरेको थियो ।
भेनेजुएलाका वर्तमान राष्टपति मोडुरोको पक्षमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँगै बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी, नेता वामदेव गौतम लगायतका नेताहरु उभिएका छन् ।